ရိုးရှင်းပြီး ဖြူစင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခင်လှိုင့်သမီးလေး “သဇင်ထူးမြင့်”
ရိုးရှင်းပြီး ဖြူစင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခင်လှိုင့်သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင့်ရဲ့သမီးချောလေး သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ ပရိသတ်တွေနဲ့ စတင်ပြီး ရင်းနှီးမှုရရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပျိုပေါက်လေး အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်လေးက အရမ်းကို ငယ်ရွယ်နုပျိုပြီး လှသွေးကြွယ်နေသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ […]
“အမေဆိုတာ သားသမီးအတွက် သေခါနီးအချိန်ထိ စိုးရိမ်ပူပန်နေတတ်ပါတယ်” လူရွယ်တစ်ယောက်ဟာ သူ့အဖေဆုံးသွားတော့ သူ့အမေအိုကို အိမ်မှာ မထားချင်တာနဲ့ လူအိုရုံကို ပိုထားလိုက်တယ်။ တစ်လမှာ တစ်ခါလောက်တော့ အမေကို သွားကြည့်တယ်။ တစ်ရက်မှာ လူအိုရုံကနေ သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူ့အမေဟာ အပျင်းဖျားပြီး သေမလို ဖြစ်နေတယ်။ ချက်ချင်းလာပါတဲ့။ သူလည်း […]
တစ်သက်လုံးမြဲမယ့် ချစ်သူစုံတွဲတွေမှာသာ ရှိတတ်တဲ့ လက္ခဏာ ( ၈ ) ခု
တစ်သက်လုံးမြဲမယ့် ချစ်သူစုံတွဲတွေမှာသာ ရှိတတ်တဲ့ လက္ခဏာ ( ၈ ) ခု ဖူးစာပါလို့ ဆုံဆည်းလာကြရတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ဘယ်သူမဆို သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် သစ္စာမဖောက်၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းချင်ကြမှာပါ။ တစ်ချို့အရာတွေက ကံတရားက ကြားဝင်ဖြတ်လို့ ပြတ်သွားတတ်တာမျိုး ချွင်းချက်ထားပြီး ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တစ်သက်မခွဲပဲ […]
“ည ၉ နာရီတွင် အိမ်ထောင်ရှိ အခြား အမျိုးသားနဲ့ အတူဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီးကို အမိဖမ်း”
ည ၉ နာရီတွင် အိမ်ထောင်ရှိ အခြား အမျိုးသားနဲ့ အတူဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီးကို အမိဖမ်း ဇနီးဖောက်ပြန်နေကြာင်း သိရှိပြီး စုံစမ်းရာ ည ၉ နာရီတွင် အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသားနဲ့ အတူရှိနေချိန် ဖမ်းမိ ဇနီး/ ခင်ပွန်းရှိလျက် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သည့် သူများအား အရေးယူထားကြောင်း […]
“နေကြာစေ့ စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာနိုင်မယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူး (၁၀)မျိုး”
နေကြာစေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင် အလွယ် တကူ ရရှိ နိုင် သလို လူတိုင်း နီးပါးကြိုက်တဲ့ အစားအစာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ နေကြာစေ့ဟာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် ကြွယ်ဝ စွာ ပါဝင် တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အရမ်းကို […]
သီလရှင်ထွက်စ ကတုံးလေးနဲ့ အရမ်းလန်းပြီးဂေါ်နေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ပုံရိပ်တွေ အသံပါဝါ ကောင်းကောင်းနဲ့ အဆွေးသီချင်းတွေကို ခံစားချက် အပြည့်ထည့်ပြီး သီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်မလေး ပိုပိုကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေ၊ ဆန်းသစ်တဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စား အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ […]
မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူ ထိုင်တော်မူဘုရားတစ်ဆူ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူ ထိုင်တော်မူဘုရားတစ်ဆူ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ ခန့်စည်သူက သူ့ရဲ့ မိဘ နှစ်ပါးနဲ့အတူ လေးကျွန်းစင်္ကြာ ထိုင်တော်မူ ဖိုက်ပါ ဘုရားတစ်ဆူကို စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ မဟာဗောဓိတထောင် ကျောင်းတိုက်မှာ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လက်မနှေးတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူဟာ မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး […]
မြင်သူတကာ အသက်ရှုမှားသွားအောင် လှရက်လွန်းတဲ့ သက်မွန်မြင့်ရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေ
မြင်သူတကာ အသက်ရှုမှားသွားအောင် လှရက်လွန်းတဲ့ သက်မွန်မြင့်ရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေ ပရိသတ်တွေအရမ်းချစ်ကြတဲ့ ဝါရင့်အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး သက်မွန်မြင့်ကတော့ မဟာဆန်တဲ့ အလှတရားကြောင့် သာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ပီပြင်လွန်းတာကြောင့်ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သက်မွန်မြင့်က မြင်သူတကာ အသက်ရှုမှားသွားအောင် လှရက်လွန်းတဲ့ ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေကို […]
“တကယ်ကို ၀မ်းသာ ကြည်နူးစရာပါ သမီးလေး ကျောင်းတက်ခွင့် ရသွားပါပြီ”
ကြည်‌နူးရပါပြီ တကယ်‌‌တော့ ဘဝဆိုတာ အမြဲတမ်းလည်း ခါးသီး‌နေတာမျိုး မဟုတ်‌ပါဘူး ကံကြမ္မာ အလှည့်‌အ‌ပြောင်း‌တွေ ရှိတတ်‌သဗျို့ . ပြန်‌လာမှပဲ လာ‌တွေ့ပြီး ‌‌စကား‌တွေအများ‌ကြီး‌ ပြောကြမယ်‌ အ‌မေနဲ့ ညီမ‌လေး‌ရေ. . #မှတ်‌ချက်‌ ကူညီ‌ပေးကြတဲ့ တစ်‌ဦးချင်း တစ်‌‌ယောက်‌ချင်းစီတိုင်းကို အထူး‌ကျေးဇူးတင်‌ပါတယ်‌. . Photo […]
“အမှိုက်ပုံကြီး အတွင်းမှာ လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လို့ လှမ်းခေါ်ပြီး မေးကြည့်လိုက်တော့”
အရင်ရက်တွေဆို အသက်အောင့်ပြီး မောင်းပြေးနေကျ အမှိုက်ပုံကြီးအတွင်းမှာ လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လို့ လှမ်းခေါ်ပြီး မေးကြည့်လိုက်တာ… အမှိုက်ပုံကြီးအတွင်းက ဘဝတွေ ပြုံးပန်းဝေနိုင်ဖို့ 😥အောင်ပန်း အဝင်လမ်းမကြီးဘေးက အနံ့ပေါင်းစုံနဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးကို အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်. . ကျနော်ကတော့ အာ့နေရာရောက်ရင် အသက်အောင့်ပြီးမောင်းပြေးနေကျဗျ. ဒီနေ့တော့ အာ့အမှိုက် အနားအရောက် ကျနော့်ဆိုင်ကယ်ဆီကုန်လို့ ထိုးရပ်သွားတယ် မိုးကလည်းကျ. […]